ब्राण्ड नेम राते काइँला - विशेष - साप्ताहिक
सन् १९७५ मा प्रदर्शन भएको बलिउड चलचित्र सोले अहिले पनि धेरैको मानसपटमा ताजा छ । यो चलचित्रको व्यापारले चलचित्रका निर्माता मख्ख भए । दर्शकमाँझपनि राम्रो छाप छोड्यो । अमजद खान चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा थिए – गब्बर सिंहको क्यारेक्टरमा । गब्बर सिंहको क्यारेक्टरले बलिउडमा एक्सन फिल्मको लयलाई एकाएक परिवर्तन गरिदिएको भारतीय चलचित्र पण्डितहरुको बुझाइ छ । उक्त चलचित्रपछि पनि अमजदले धेरै चलचित्रमा काम गरे, फरक–फरक भुमिकामा तर उनले गरेका सबै क्यारेक्टर गब्बर सिंहको सामु ओझेलमा परे । वास्तबमा अमजदले आफुलाई अनेक भुमिकामा बलिउडमा स्थापित गराउन खोजेका थिए तर जतिसुकै भुमिकामा स्थापित हुन खोजेपनि गब्बर सिंह ब्राण्ड नेम बन्यो ।
सोलेबाट अमजद खान गब्बर सिंहको रुपमा चिनिएझैं नेपाली चलचित्र चिनोबाट सुनील थापाले राते काइँलाको ब्राण्ड बनाए । चिनोले अभिनेता थापालाई दुर्दान्त खलनायक राते काइँलाको रूपमा स्थापित गरिदियो । भुवन केसी, कृष्टि मैनाली, शिव श्रेष्ठलगायत चर्चित कलाकार पनि थिए, चिनोमा । तर, राते काइँलाले सबैलाई छायामा पारे । उनको अभिनय दर्शकले निकै मन पराए । टेबलमा रहेको कफिको चुस्कि लगाउँदै थापा भन्छन्, ‘कलाकारले हरेक प्रोजेक्टमा राम्रो गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, कुनबाट कति सफलता पाइन्छ, त्यो भविष्यमा मात्रै थाहा हुन्छ ।’ अहिलेसम्म तीन सयबढि चलचित्रमा फरक–फरक क्यारेक्टरमा देखिएका थापा राते काइँलाको नामले जति चम्किए, अरू भूमिकामा कहिल्यै चम्एिनन् ।
बलिउड संसारको सबैभन्दा ठुलो चलचित्र उद्योग हो, जहाँ संसारभरिका कलाकार स्थापित हुन चाहन्छन् । सानो भुमिका किन नहोस्, बलिउडको स्वाद चाख्न खोज्ने कलाकारको जमात संसारभरी व्यापक छ । नेपालबाट पनि धेरै कलाकार बलिउड छिर्ने सोच अनुसार मुम्वईमा संघर्षरत छन् । कतिपय हार खाएर नेपाल फर्किका छन् । तर, सुनील थापा यस्ता एक अभिनेता हुन्, जो बलिउडमा नाम र दाम कमाएर नेपाली चलचित्र उद्योगमा छिरेका हुन् । धेरैलाई के लाग्छ भने थापाको नेपाली चलचित्रपछि बलिउड छिरेका हुन् । तर, उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र नेपाली थिएन । बलिउडपछि मात्रै नेपाली चलचित्रमा स्थापित भएका हुन् । १९७० को दशकमा कोलकाताबाट प्रकाशन हुने जेएस म्यागजिनमा फोटो पत्रकारका रूपमा काम गर्थें थापा । कामकै सिलसिलामा अभिनेता देव आनन्दसँग भेट भयो, भुटानमा । थापा सम्झन्छन्, ‘देव आनन्दले मलाई सीधै चलचित्र खेल्न अफर गर्नुभयो, म त छक्क परेँ ।’ त्यसबेला संयोगले थापा र देव आनन्दको खाना खाने टेबल एउटै पर्‍यो । खाना खाइरहेका बेला देव आनन्दले सुनील यु गट अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फेस फर मुभी भनेको सुन्दा छक्क परे । चेतन आनन्दले निर्देशन गरेको चलचित्रमा देव आनन्दकै सहयोगमा उनले डेब्यु गर्ने मौका पाएँ – भिलेनको सानो रोलमा । यो चलचित्रमा देव आनन्द अभिनेताका रुपमा थिए । यो चलचित्र केहि समयपछि छायाँकनमा गयो । यो चलचित्र निकै लामो समय छायांकन भयो, १ वर्षभित्र सक्ने भनिएको ५ वर्ष लाग्यो । तर, यति लामो समय छायांकन भएको चलचित्र साहिव बहादुर सुपर डुपर फ्लप भयो । हलमा लाग्यो–लागेन समेत कसैले पत्तै पाएनन् । १९ वर्षका लक्का जवान सुनील त्यतिवेला सानै उमेरमा बलिउडमा छिर्न पाएकोमा मख्ख त थिए तर लामो समयको मिहेनतले निर्माण भएको चलचित्र १ दिनपनि चल्न नसकेपछि सुनील असाध्यै निराश भए ।
चलचित्र छोडेर फुटबल
फोटोग्राफीमा खुसी थिए सुनील । तर, उक्त पेशा छाडेर चलचित्रतिर हाम फालेका थिए । साहिब बहादुर फ्लप भएपछि भने उनी फुटबलतिर लागे । तीन वर्ष फुटबलमा सक्रिय भए । सोहि क्रममा अभिनेता थापा भारतमा भएको एउटा क्रिकेट म्याच हेर्न पुगे । म्याच कसको थियो भन्ने त हेक्का भएन, उनी भन्छन्, ‘तर उक्त दिनले मेरो जीवनमा फेरि अर्को मोड ल्याइदियो ।’ सो म्याचका बेलामा सुनील चर्चित निर्देशक के बालाचन्दरको नजरमा परे । किनकी, सुनीललाई बालाचन्दरले राम्रोसँग चिन्थे । चर्चित अभिनेता रजनीकान्त, कमल हसनलगायत बलिउडमा दर्जनौं खतरानाक स्टार जन्माइसकेका बालाचन्दरले सुनीलको लुक्स देखेरै चलचित्र खेल्न प्रस्ताव गरे । सुनीलले त्यो दिन सम्झिए, ‘उहाँले चलचित्र एक दुजे कि लिएका लागी प्रताब गर्नुभएको थियो, मैले उक्त प्रस्ताव तुरुन्तै स्वीकार गरेँ । यो चलचित्रमा सुनीलको नाम छाएपछि बलिउडमा निकै चर्चा भयो । नाम चलेका निर्देशक र कलाकारकाबिचमा सुनील थापा जस्तो फ्लप कलाकारलाई किन काम गर्न दिइयो भन्ने नकारात्मक टिप्पणी पनि चले बलिडमा । तर सकारात्मक–नकारात्मक विभिन्न टिकाटिप्पणीका बाबजुद चलचित्रको छायांकन सुरु भयो । तोकिएकै समयमा चलचित्रको छायांकन सकियो । प्रदर्शन भयो । सुपर डुपर हिट भयो । एकाएक चलचित्रको चर्चासँगै सुनील पनि भारतीय मिडियामा राम्रैसँग छाए । साहिब बहादुर सुपर डुपर फ्लप भएर शिथिल भएका सुनीलको मन एक दुजे कि लिए हिट भएपछि हलुका भयो । कमल हसन, रति अग्निहोत्री, माधवीजस्ता बलिउडका एकसे एक कलाकारमाझ मुख्य भिलेनको भूमिका पाउनु र चलचित्र पनि राम्रो चल्नुले उनको चलचित्र यात्रामा शुभ–संकेतको लाइट बल्यो । उक्त चलचित्र लगत्तै अभिनेता थापाले साउथ इन्डियन प्रोजेक्ट कास्मिर कादलीमा मुख्य भिलेनकै भूमिकामा काम गर्न पाए । अटो राजा, सुगन्ध, शपथ लगायतका चलचित्रमा पनि एकाएक देखिए, भिलेन कै भुमिकामा ।
जब नेपाली चलचित्र खेल्ने रहर जाग्यो
आधा दर्जनको हाराहारी बलिउड चलचित्रमा काम गरिसकेका थापा एकाएक परिवर्तन भए । बलिउडवाट धमाधम चलचित्रमा अफर आउँदा पनि उनको मुड चेन्ज भयो । एकाएक नेपाली चलचित्र खेल्ने रहरले सतायो । तुरुन्तै नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएको केहि समयमै उनले चलचित्रको अफर पाए । ‘के खोज्छस् काना, आँखा’ भनेजस्तै नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने ईच्छा थियो, चलचित्रको अफर आयो । थापाले तुरुन्तै यो चलचित्रमा काम गर्ने निधो गरे । चलचित्र थियो, मसाल । बलिउडमा एकाएक चम्किएका अभिनेता नेपाली चलचित्रमा काम गर्न थालेको सुनेपछि नेपाली चलचित्र बजारदेखि बलिउडसम्म विभिन्न चर्चा भए । सुनील भन्छन्, ‘म बलिउड फर्किन्न भनेर त आएको कहाँ थिएँ र ? तर चर्चा अर्कै किसिमले भएछ ।’ नेपाल फर्किएको केहि समयमै रवि चोपडाले आज कि आवाजका लागि प्रस्ताव गरे । सुनील फेरी मुम्बई हान्निए । ‘यो चलचित्र सक्किए लगत्तै मानव हत्या, मन्नु द ग्रेट लगायतमा पनि काम गरेँ’, उनले सम्झिए । त्यसपछि सुनीललाई काठमाण्डौं र मुम्बई पानी–पँधेरो जस्तै हुन थाल्यो । यता–उता दुवैतिर सक्रिय भए । दुवैतिर धमाधम काम गरिरहे । यसैक्रममा ध्रुवरत्न शाक्यको चलचित्र चिनोका लागि काठमाडौं फर्किएका उनी राते काइाला बनेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाए, गज्जवले स्थापित भए । जब यो चलचित्रवाट नेपाली चलचित्रमा चम्किए, त्यसपछि बढि बलिउड भन्दा यतै व्यस्त हुने निधो गरे । त्यसपछि उनी अभिनित चलचित्र धमाधम हलमा लागे । ६० वर्ष भन्दा माथीको पाको उमेरमा यि अभिनेता झन्–झन् व्यस्त छन् । केहि चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा छन्, केहि चलचित्रको धमाधम छायांकन भैरहेको छ ।
मेरी कोमको प्रस्ताव
यो बेलासम्म थापा बलिउडमा अक्ल–झुक्कल मात्रै देखिन्थे, धेरै व्यस्त नेपाली चलचित्रमै थिए । ५ वर्षअघि उनलाई बलिउडको एउटा बिग प्रोजेक्टबाट प्रस्ताव आयो । चलचित्रको नाम थियो, मेरी कोम । कास्टिङ डाइरेक्टर श्रुति महर्जनले पहिलो प्रस्ताव गरेकी थिइन् । ‘आइ एम कास्टिङ डाइरेक्टर फ्रम मुम्बई एन्ड वर्किङ फर सञ्जयलीला भन्साली प्रोडक्सन,’ महर्जनले टेलिफोनमा गरेको त्यतिबेलाको प्रस्ताव सम्झिए, सुनीलले । भने, ‘नेपालमा रहेका बेला मुम्बईबाट आएको उक्त प्रताव अस्वीकार गर्ने त कुरा भएन । मुख्य भूमिका पाएको खण्डमा खेल्छु भनेँ । उताबाट जवाफ आयो, ‘हिरोको जस्तै रोल हो, डन्ट वरी सुनील ।’ सुनीलले स्क्रिप्ट पठाउन भनेँ । सञ्जयलीला जस्तो मान्छेको स्क्रिप्ट माग्यो भनेर छक्क परिछन् श्रुति । स्क्रिप्ट पढिसकेपछि मेरी कोमका लागि सुरुमा दुईवटा दृश्यको लुक टेस्ट पठाए, सुनीलले । बलिउडमा निर्माण टिमले प्रताब गरेपनि अनुबन्धन गर्नुअघि जो कसैको पनि लुक टेस्ट गर्नुपर्ने नियम छ । ‘मैले प्रोड्युसर/क्यामेराम्यान सुजन प्रजापती र निर्देशक सुभाष कोइरालालाई मेरो लुक खिचिदिन रिक्वेट गरेँ । युवराज लामालाई भनेर रंगशालाको जिममा बक्सिङको प्रबन्ध मिलाएँ । र, केही लुक्स छानेर श्रुति महर्जनलाई पठाएँ, सुनील सम्झन्छन्, ‘ त्यतिवेला सञ्जयलीला भन्साली, निर्देशक ओमंग कुमार र प्रियंका चोपडा क्यानडामा एक चलचित्र फेस्टिबलमा हुनुहुन्थ्यो । महर्जनजीले मेरो लुक्स क्यानडा पठाउनुभएछ । उहाँहरूले हेरेपछि सुनीललाई तत्काल मुम्बई बोलाउनू, हामी पनि आउँछौं भन्नुभएछ । महर्जनजीले फोन गरेर मलाई सुनाउनुभयो । तर, मैले तत्काल आउन नसक्ने जवाफ दिएँ । किनभने नेपालमा दुईवटा चलचित्रको डबिङ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अर्को एक चलचित्रको छायांकन अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।’ त्यसपछि सुनील र निर्माण टिमको सल्लाहअनुसार १५ दिनपछि मुम्बई भेट्ने निधो भयो । मुम्बई पुगे सुनील । एयरपोर्टमा उनलाई लिन चलचित्र निर्माण टिमले मान्छे पठाएको थियो । त्यहाँ पुगेपछि काम र पारिश्रमिकको कुरा भयो । सुनील फेरी त्यतिबेलाको सम्झना गर्छन्, ‘पहिलो भेटमै भन्सालीले पारिश्रमिकको कुरा उठाउनुभयो । मैले क्यारेक्टर मन परेको र आफ्नो इच्छाअनुसार दिन भनेँ । तर, अचम्मै भयो । मैले आशा गरेभन्दा बढि पारिश्रमिक
प्रियंका चोपडा : डाउन टु अर्थ ह्युमन बिइङ
केहि चलचित्रमा काम गरिसकेकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा मुख्य भुमिकामा पो थिइन् मेरी कोममा । त्यतिवेलासम्म सुनीलले प्रियंका चोपडा खतरानाक अभिनेत्री हुन् की भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर अचम्मै भयो, सुनीलको सोचभन्दा धेरै बेग्लै थिईन् प्रियंका । थापा सम्झन्छन्, ‘उहाँसँग नजिक भएपछि म चकित भए । निकै अनुशासित, मिहेनती, चार घण्टा वर्कआउट गरेर पनि घरमा पनि जिम गर्ने, ट्रेनिङमा आफ्नै ट्रेनर लिएर आउने, समयमै मिटिङ र वर्कशपमा आउने बानीका कारण म फिदा भएँ ।’ सुनीललाई ट्रेनिङका क्रममा थकान फिल हुन्थ्यो, प्रियंका खटिएर ट्रेनिङ गरेको देखेपछि उनी फेरी उठेर ट्रेनिङ सुरु गर्थे । ट्रेनिङकै क्रममा एउटा दुःखद् समाचार आइपुग्यो । सुनील सम्झन्छन्, ‘प्रियंकाका बाबुको निधनले भयो, तर उहाँको बुबा बितेको ६ दिनपछि छायांकन सुरु भयो । यस्तो दुःखद् स्थितिमा पनि प्रियंका चलचित्रका लागि तयार हुँदा मैले उहाँको प्रोफेसनालिज्म राम्रोसँग बुझेँ ।’ यो चलचित्रको छायांकन सकियो । प्रदर्शन भयो । बिग प्रोजेक्ट भनिएको मेरी कोमले बलिउडमा तहल्का पिट्यो । चलचित्रसँगै चर्चामा आए, सुनील पनि । प्रियंकासँग काम गर्दा कहिल्यै उनले सुनील आफुभन्दा सानो सुनीलसंग सम्झना छ । भन्छन्, ‘प्रियंका घमण्डी र आफुभन्दा ठुलो कोहि छैन भन्ने वजारमा चर्चा छ, तर रियलमा उहाँ यो भन्दा ठिक विपरित ।’ प्रियंकाले नेपालको बरिष्ठ कलाकार भनेर आफुलाई भन्दा माथी राखेर बलिउडमा चिनाउँदा सुनील निकै भावुक हुने गरेको बताउँछन् । रोचक कुरा त के रहेछ भने प्रियंकाले सुनील थापाबारे एक हप्ता रिसर्च गरेपछि बल्ल नजिक भएकी रहिछन्, जुन कुरा एकपटक चलचित्रको सुटिङ भैरहेका बेला प्रियंकाले कुरा फुत्काएकी रहिछन् । मैले के मात्रै बुझेँ भने, उहाँ बलिउडको क्षमतावान अनुशासित कलाकार हो । उहाँ सुन्दर अभिनेत्री मात्रै होइन, डाउन टु अर्थ ह्युमन बिइङ पनि हुन् ।’
सुनील थापा अचम्मका अभिनेता हुन्, जो उनलाई बुझ्नेहरुले भनेको कुरा हो । कोहिसँग रिसाउँदैनन् । साना देखी ठुला सवैलाई सम्मान गर्छन् । कसैसँग झगडा गर्दैनन् । जो कसैका सुझाव र सल्लाहलाई कान थापेर सुन्न सक्ने क्षमता छ । अहिलेका कलाकारहरुको ३० लाख, ४० लाख पारिश्रमिक पुग्यो भन्दा उनी छक्क पर्छन् । थप्छन्, ‘यदि मैले उहिल्यै अहिलेका कलाकारहरुले जसरी पारिश्रमिक बढाएको भए के हुन्थ्यो होला ? सायद अहिले १ देखी २ करोडमा निर्माण हुने चलचित्र ५ करोडमा पनि निर्माण हुँदैनथिए ।’ थापा के भन्छन् भने कलाकारको पारिश्रमिक वढ्नु राम्रो कुरा हो तर एउटा कलाकारले लाखौं रकम लिने हैसियत त्यतिबेला मात्रै बन्छ जतिबेला त्यो कलाकारको चलचित्रले पनि करोडौंको ब्यापार गर्छ ।’ अभिनय क्षमताका कारण सधै सवैको नजरमा परेका निर्माता थापा अहिले पनि उत्तिकै व्यस्त छन् । तर अन्य कलाकारहरुले जस्तो कहिल्यै पारिश्रमिकमा बार्गेनिङ नगरेको उनी बताउँछन् । नेपाली चलचित्रको अवस्था हेरेर मात्रै पारिश्रमिकमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
फ्लप चलचित्रले चिन्तित
सधैजसो नकारात्मक क्यारेक्टरमा गुण्डाको भुमिकामा चिनिएका सुनील बास्तवमा नेपाली चलचित्रका बलिया खम्बा हुन् । ‘नकारात्मक क्यारेक्टर मेरो रोल मात्रै थियो, तर म सधै चलचित्र क्षेत्रको समृिद्धको लागी सकारात्मक रुपमा लागिरहेँ’, उनी थप्छन्, ‘म जस्ता केहि सुनीलहरु सानातिना सपनामा बलिउडमा भुलेको भए, नेपाली चलचित्रको माया नगरेको भए के हुन्थ्यो होला ? सायद ईतिहासले पक्कैपनि सम्झिनेछ ।’ धमाधम नेपाली चलचित्र फ्लप हुँदै जाँदा थापा चिन्तित छन् । आखिर निर्माता डुब्दै गएपछि चलचित्र बनाउन को आउँछ ? उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय र चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नेहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ, करोडौं लगानी गरेका निर्माताको लगानी कसरी उठ्न सक्छ र समग्र चलचित्रको प्रगतिका लागी के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’ अहिले बर्षमा ५० करोडभन्दा माथी नेपाली चलचित्रमा घाटा भैरहेको छ । दर्शक भन्दा धेरै र एकैपटक ३–४ वटा चलचित्र जुध्ने परम्पराका कारण पनि चलचित्र फ्लप भएको अभिनेता थापाको तर्क छ । उनि थप्छन्, ‘आ–आफ्नो किसिमले मिहेनतका साथ काम गरौं, पक्कैपनि हामीले सोचेको नेपाली चलचित्रको भविष्य सुरक्षित हुनेछ ।’ उनि अभिनित क्याप्टेन, आरुषी प्रदर्शन हुनै बाकी छ । केहि समयअघि साइन गरेको विश्वनाथ काका तथा केहि अनटाइटल प्रोजेक्ट छायांकनको तयारीमा छन् । शेरे हिन्दोस्तान नामक भोजपुरी चलचित्र पनि प्रदर्शनको तयारीमा छ । मार्चको अन्तिममा बलिउडको अर्को चलचित्र हाइदर पण्डितको सुटिङमा ब्यस्त हुनेछन्, उनि ।
बिदेशमा मार्केट खोजौं
अभिनेता थापाले सरकारी निकायबाट कुनैपनि सहयोग हुन नसक्दा नेपाली चलचित्रको बिदेशमा बजार राम्रो बन्न नसकेको महशुश गरेका छन् । ‘जब बलिउड र हलिउडका चलचित्र विश्वभरी प्रदर्शन हुन सक्छन् भने नेपाली चलचित्र किन हुन नसक्ने ?’ उनी थप्छन्, ‘ईङ्लीसमा पनि डबिङ गरेर विदेशमा पनि चलाउन सकिन्छ । तर यसका लागी केहि तयारी गर्न जरुरी छ ।’ विदेशमा लाखौं नेपालीहरुको बसोबास रहेको र कथा मन परेको खण्डमा नेपालीबाहेक अरु दर्शक पनि तान्न सकिने भएकाले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । थोरै दर्शकमाँझ चलचित्र देखाउँदा नेपाली चलचित्रको ब्यापार नहुने तर लगानी बढिरहने उनको बुझाई छ ।
चलचित्रमा अभिनयसँगै चलचित्र सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन गराउने एभरेष्ट फिल्म एकेडेमीमा अध्यक्ष समेत रहेका सुनील थापा डियर जिन्दगी नामक सिरियलमा समेत ब्यस्त छन् । कतिपयले यी अभिनेतालाई रिटायर्ड कहिले हुने ? भनेर प्रश्न गर्छन् रे । सपनाले मानिसलाई बाँच्न सिकाउँछ । मानिसलाई अघि वढ्न सहयोग पुर्‍याउँछ । थापा मुँसुक्क हाँस्दै भन्छन्, ‘ओस्कार एवार्ड नजितेरै त के रिटार्यड हुनु र ?’